Ọka, ihe ubi: nkọwa, foto, ihe na-agwọ ọrịa na iji ha eme ihe - Ndi mmadu - 2020
Okpokoro ọkụ na-esi nri
Cornflower bụ onye ọbịa na-enweghị mmasị na ubi na n'ubi, n'ebe ahụ ka ha na-alụso ya ọgụ, dị ka ọ dị na ahịhịa ọ bụla. Ma n'otu oge ahụ, obere okooko osisi a na-arụ ọrụ dị ka isi iyi nke ihe ọkụkụ maka ọgwụgwọ ọdịnala, a na-ejikwa ya na mpaghara ndị ọzọ.
Kedu ihe bara uru?
Otu esi eji osisi
Nchịkọta na nkwadebe maka ihe gbasara ahụike
Ụdị Cornflower (Centauréa jácea) bụ ahịhịa ndụ nke sitere na Cornsters, nke bụ akụkụ nke ezinụlọ Astera (aha ọzọ - Compositae). Ngwurugwu ahụ, mgbe ụfọdụ na-eru 1 mita n'ịdị elu, alaka dị n'akụkụ elu, n'elu alaka ndị a na-ama okpueze na inflorescences. Akwụkwọ ndị ahụ dị warara, elongated, ọlaọcha n'ile anya n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha kpuchiri ntutu isi. A na-achịkọta okooko osisi na inflorescences dị ka nkata lilac-pink ma ọ bụ lilac-acha odo odo agba.
Otu uru dị mma bụ okooko osisi ndị nwere ike ịba uru maka ahụike mmadụ, ya bụ: Chlorophytum, Aloe, Geranium, Laurus, Kalanchoe, Cactus.
A na-ekesa ifuru ahụ na Europe dum na Siberia. A na-ahụkarị ya n'ọhịa n'ọhịa, n'akụkụ okporo ụzọ, na ala ahịhịa juru. Oge ezumike oge okpomọkụ, na ụfọdụ ụdị - rue October.
Ị ma? Akwukwo Latin nke genus Cornflowers (Centauréa) bu onye Swedish theistist nke XVIII, bu Carl Linnaeus. O sitere na okwu Latin "centaureus" - "na-ezo aka na centaurs". Dika akwukwo ochie nke Gris, site n'enye aka nke ifuru a, centaur Chiron gwoo ogbugbu ya site na ugwo ojoo.
Oju oke, n'agbanyeghi na ahihia nke ohia a juru ebe nile, enweghi omumu omumu ya. A maara na osisi ahụ nwere tannins, xantho-glycoside centaurine na ascorbic acid, na osisi nwere mmanụ dị mkpa.
Na ndị mmadụ na nkà mmụta ọgwụ, nke a ọhịa ifuru achọpụtawo nnọọ ngwa ngwa. Ọgwụ ndị e mere na ya nwere diuretic, choleretic, analgesic, mgbochi mkpali na ike na-arụ ọrụ. Ejiri maka ọrịa obi, ọrịa ime afo, isi ọwụwa, jaundice, dropsy, ọrịa akụrụ.
Diuretic, safflower, iglitsa, asparagus, zizifus, hops, lavender, celandine, plerantrantus, na black chokeberry nwekwara mmetụta diuretic
Iji mepụta ọgwụ preparations niile akụkụ nke osisi na-eji - ị ga, epupụta, inflorescences, mgbọrọgwụ. Ha na-eme infusions, herbal baths, ha na-agba na steamed, eji na-acha akwụkwọ. N'ebe a na-emepụta ihe, ebe ọka mmanu na-arụ ọrụ na-ejikwa ya eme ihe, a na-eji ya na ihe mkpuchi nke ịchọ mma, na infusions - dịka mmiri. N'okpuru ebe a bụ nkọwa nke ụfọdụ ihe ịchọ mma na ọgwụgwọ dabere na ya.
A na-eji ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-eme ka ọkpụkpụ na-esi n'ọkụ. A na-emeso osisi ndị a kụrụ n'ubi, ọkacha mma nke a kụrụ n'ubi, na mmiri esi mmiri, nke a na-agbanye na gauze, a na-etinyekwa ihe ọkụkụ na-ekpo ọkụ na isi iyi nke nkasi obi. Maka ọrịa obi, ọrịa aka na ọrịa catarrhal, a na-eji infusion. A na-eme ya: 2 teaspoons nke osisi akọrọ na-awụnye ya na iko mmiri sie, ha na-eguzo maka awa ole na ole na igbapu. A na-ewere ọgwụ ọjọọ ahụ na tablespoon ugboro atọ n'ụbọchị n'ụbọchị ole na ole tupu nri.
Ọ dị mkpa! N'ihe gbasara ọmụmụ na-adịghị ezu nke ọgwụ ndị na-agwọ ọrịa, ị kwesịrị ịjụ ndị ọkachamara maka iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na ya. A naghị atụ aro ka eji ọgwụ ndị dị otú ahụ eme ihe maka ụmụ nwanyị dị ime ma na-agba umuaka, tinyere ụmụaka.
Mgbe afọ ọsịsa na-enyere infusion nke mgbọrọgwụ akọrọ. A na-eme ya na nke gara aga: 2 teaspoons kwa iko mmiri esi nri, awa 2 nke infusion na nsogbu. A nabatara ya kpọmkwem kpọmkwem tupu ị rie nri.
Mkpọ ihu ihu igwe na-enwe mmetụta dị mma n'ahụ anụ. Maka imepụta nke e weere 3 tablespoons nke okooko osisi a mịrị amị wee wụsara 100 ml nke mmiri sie, dị mma ruo 80-90 Celsius. Ike na itinye okooko osisi kpuchie ma hapụ ka ajụkwa. Mgbe obi jụrụ, a na-agwakọta infusion na 50 g mmanụ aṅụ mmiri mmiri. A na-etinye ihe mkpuchi ahụ n'ahụ anụ ahụ dị ọcha na ndị agadi maka minit 20. A na-eji nsị ọka na-eme ka mmiri. Maka nri dị mkpa 2 tablespoons nke fatịlaịza okooko osisi. A na-awụnye ya na iko nke mmiri mmiri na-ekpo ọkụ, dị n'okpuru mkpuchi ruo mgbe a kpochara ya kpamkpam ma dezie ya. A na-eji infusion a na-emepụta ihe dị ka nsị anụ ahụ mgbe niile. A na-etinye ya na akpụkpọ ahụ 1 oge kwa ụbọchị. Ị nwekwara ike ifriizi na infusion na tins. Nsonaazụ bụ ihe a na-akpọ cosmetic ice, nke a na-ejikarị mee ihe maka nsị kwa ụbọchị.
Ọ dị mkpa! A na-eji mmiri anụnụ anụnụ na-acha anụnụ anụnụ na-eji nanị akpụkpọ anụ mee ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ụbụrụ na-egbu egbu.
A na-ejikwa ihe ọkụkụ na-eme ka ọ bụrụ ihe na-eme ka ọ ghara ikpochapu ọkpụkpụ na-acha ọbara ọbara. Iji mee nke a, jiri otu tablespoon nke okooko osisi a mịrị amị na otu iko mmiri sie, mee ka ọ dị mma ruo 90 ° C. Mgbe ahụ jụrụ oyi, ihe ọ na-eme ka ọ bụrụ okpomọkụ, a na-etinye ya na nku anya ya. Usoro ahụ na-ewe ihe dị ka minit 20.
Na mgbakwunye na ọgwụgwọ na cosmetological ngwa, ọka ọka na-mara dị ka ezigbo mmanụ aṅụ na osisi. Site na arụpụtaghị ihe, ọ, n'ezie, ọ dị ka ihe na-adọrọ adọrọ na nzụlite ndị dị otú ahụ dị ka acacia ma ọ bụ linden, ma ọ na-enye ndịrịta azụ n'oge na-adịghị anya. A na-eme atụmatụ arụpụta ya dịka 100-130 n'arọ kwa hectare n'ihe banyere ihe osise siri ike site na ifuru a.
Ị ma? Ozugbo epupụta ị ga nke osisi a nwetara agba odo.
Osisi ahụ na-agakwa ịzụ anụ ụlọ. Na mgbakwunye, mgbe ụfọdụ a na-eji ya dị ka ihe eji achọ mma maka akwa akwa na akwa akwa.
A na-egbute ahihia na okooko osisi nke na-esi ísì mmanụ n'oge dum nke okooko. Mkpokọta mgbọrọgwụ mepụtara na ọdịda. A na-eji osisi ndị a kụrụ ọhụrụ na nke a mịrị amị mee ihe maka ọgwụgwọ ọgwụgwọ. A na-akpọkọta nchịkọta a na-etinye ya n'ọhịa ma ọ bụ n'ime ụlọ nwere ventilated, nke ìhè anyanwụ na-abanyeghị. Na nke a, a ghaghị ịgbanwe oge nchịkọta ahụ. Iji mee ngwa ngwa, ị nwere ike iji ezigbo draka. N'ọnọdụ a, nchịkọta ahụ akpọnwụwo na okpomọkụ nke + 40-50 Celsius C. A na-echekwa ihe akụrụngwa dị na akpa iko ma ọ bụ na igbe. Ndụ ndụ - ruo afọ 2.
Ya mere, cornflower na-emepụta ọ bụghị nanị isi iyi nke ọgwụ ọgwụ, kama ọ na-ahụkwa ngwa ngwa na nchịkọta anụ. Ọzọkwa, ọmarịcha okooko osisi dị mma ma mara mma nwere ike ije ozi dịka ogige okooko osisi mara mma.